SXSW 2014 Interactive Infographic Kechie | Martech Zone
SXSW 2014 Interactive Infographic Kechie
Tuzdee, Machị 18, 2014 Thursday, June 18, 2015 Jenn Lisak Golding
Otu n'ime ihe ndị dị jụụ gbasara onye anyị na Meltwater elekọta mmadụ media nlekota software bụ na ị nwere ike inyocha isiokwu na ihe omume nke ọma iji nweta nkọwa zuru oke nke mmetụta na ewu ewu. N'afọ a, ha malitere nlekota uzu gburugburu SXSW na February 26 wee chọta ụfọdụ mara mma na-ewu ewu:
NSA whistleblower, Edward Snowden, bụ nnukwu ihe. 7% nke mmekọrịta mmadụ na ibe ya bụ Snowden metụtara.
Postedmụ nwoke zigara ọtụtụ ihe gbasara mmekọrịta mmadụ: 62% na 38% maka ụmụ nwanyị.
Justin Bieber nwere aha 400% karịa Grumpy Cat! (Kwuo whaaaa?)
Maka ọkwa niile dị jụụ, lelee ama ama n'okpuru. Echefukwala ilelee onye nkwado anyị bụ Meltwater elekọta mmadụ media nlekota ngwá ọrụ maka ụlọ ọrụ.
Creatmepụta weebụsaịtị Weebụ Na 2014
Ọ bụghị ọtụtụ gbasara egwu ọhụụ ma ọ bụ teknụzụ ọhụụ. Ahughi m ihe obula banyere ihe nwute (ndu 3 furu efu) nke SXSW 2014. Ikwu okwu.
Hey John - Ezi ajụjụ. Emepụtara m infographic a, yabụ m ga-aza: anyị lebara anya na mmekọrịta mmekọrịta nke ogbako ahụ kpọmkwem, nke malitere na Machị 7-11. Yabụ, ọ naghị ekwupụta ọdachi jọgburu onwe ya nke mere na Machị 12. Anyị kwenyere na ọ bụ ihe na-atọ ụtọ na enweghị mkparịta ụka banyere teknụzụ ọhụụ n'oge a. Na, dịka onye nọ na Osimiri Uhie 2 ụbọchị tupu ọdachi ahụ jọgburu onwe ya, obi m na-egosi onye ọ bụla metụtara ya.